को हो फ्रान्सको प्रतिद्धन्दि ? फाइनल पुग्ने दोस्रो टिम कुन? इङल्यान्ड कि क्रोएसिया ?
Posted: 2018-07-11 10:25:52
मस्को – विश्वकप सेमिफाइनलको तीतो अनुभव भुलाउन वर्षाैदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका इङ्ल्यान्ड र क्रोएसिया बुधबार मस्कोमा आमने–सामने हुँदा उपाधिसँगको दूरी एक खेलमा छोट्याउने लक्ष्यमा मैदान प्रवेश गर्नेछन्।यी दुई बीचको विजेताले उपाधिका लागि फाइनलमा फ्रान्ससँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछ। बेल्जियमलाई हराउँदै फ्रान्स फाइनलमा पुगिसकेको छ।
इङ्ल्यान्डले अन्तिम १६ मा कोलम्बियालाई निराश पार्र्दै विश्वकपको नकआउट चरणमा पेनाल्टी सुटआउटमा भोग्दै आएको हारको शृंखलामा पूर्ण्विराम लगाएको थियो । त्यस क्रममा गोलकिपर जोर्डन पिकफर्डको प्रदर्शन प्रशंसनीय रह्यो । शनिबार स्विडेनलाई २–० ले निराश पार्दै २८ वर्षपछि विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा स्थान पक्का गर्दा पनि पिकफर्डको प्रदर्शन उच्च थियो।
यता समूहचरणको पहिलो खेलमा नाइजेरियालाई पराजित गरेको क्रोएसियाले दोस्रो खेलमा अर्जे्न्टिनामाथि सहज जित हात पारेको थियो । अन्तिम खेलमा क्रोएसियाले आइसल्यान्डलाई पराजित गरेको थियो । समूहचरणमा सहज जित हात पारेको क्रोएसियाले अन्तिम १६ मा डेनमार्क र क्वार्टरफाइनलमा आयोजक रूसको यात्रा समाप्त पार्दै इङ्ल्यान्डसँगको भेट पक्का गरेको हो । अन्तिम १६ र क्वार्टरफाइन दुवैमा क्रोएसिया पेनाल्टी सुटआउटमा भाग्यमानी साबित भएको थियो । जहाँ गोलकिपर ड्यानियल सुबासिचको प्रदर्शन प्रशंसनीय थियो।
‘पक्कै पनि इङ्ल्यान्डविरुद्धको खेलका लागि हामीसँग पर्याप्त शक्ति बाँकी छ,’ डालिचले भने, ‘यो निकै प्रतिस्पर्धात्क खेल हुनेछ । तर हामी इङ्ल्यान्डको चुनौतीको पन्छाउनेमा विश्वस्त छौं।’